RASMI: Dhismaha garoonka Stadio della Roma oo la ansixiyay + Sawirro – Gool FM
RASMI: Dhismaha garoonka Stadio della Roma oo la ansixiyay + Sawirro
Raage December 5, 2017
(Roma) 05 Dis 2017 – Mashruucii gegada Stadio della Roma ayaa ugu dambayntii la ansixiyay isagoo ogolaansho ka helay dowladda hoose ee Roma iyadoo lagu wado in albaabada loo furo sanad-ciyareedka 2020-21.
Waxaa qabsoomay kulan maanta lala yeeshay dhowr shirkadood oo ah kuwo dhismaha oo naqshadohooda la is barbardhigay kuwaasoo sanadihii yaraa ee dambe dib u eegisyo badan lagu sameeynayay.
Waxyaabaha la isla meel dhigay waxaa ka mid ah in meesha laga saaro laba dabaq oo dhaadheer oo qorshaha ku jirey iyo in uu golaha degaannku dusha u rito qaar ka mid ah kharashaadka ku baxaya kaabayaasha mashruuca sida buundo la saarayo Tor di Valle area, iyadoo sida uu qorshuhu yahay uu garoonka Stadio della Rom uu diyaar noqon doono fasalka 2020-21.
Ronaldo-YARE oo ugu dambeyn yeeshay bog Instagram ah ugana dhawaaqay in Messi yahay.......?
12-kooxood oo ilaa iminka u soo gudbay wareega 16-ka Champions League